🥇 ▷ Muuqaalka La Filayo inuu La Yimaado iPhone 11 ✅
Muuqaalka La Filayo inuu La Yimaado iPhone 11
Apple Moodel cusub oo iPhone ah waqtiga Turkiga maanta, 20: 00 Waxay soo bandhigi doontaa. Soo bandhigida moodello cusub oo leh saacado ka hadhsan daadinta kama dambaysta ah inbadan ayaa soo muuqday.
Bixinta taleefannada casriga ah inay noqdaan bangi awood leh oo leh taageero wireless Wicil-sheegga wireless-ka ah aalado leh taageero koronto la’aan. taleefankaaga kuu oggolaanayaa inaad lacag ku dallacdo. Aaladaha aad ku dallaci karto waxaa ka mid ah telefoonnada gacanta, smart smart iyo headless wireless Waxa kale oo aad ku dallaci kartaa aaladaha dharka la xidho sida.
Falanqeeye Ming-Chi Kuo Warbixinta ugu dambeysay ee ay daabacday dhanka kale tilmaamid. Sida lagu sheegay warbixinta cusub, teknolojiyadda soo-celinta wireless-ka ee la filayo in lagu heli karo taxanaha iPhone 11, sanadkan sidoo kale laguma dari doono. Xaaladdani waa ku filan tahay ku guuldaraysiga hubinta hufnaan Kuo, shirkadda ayaa baajisay sababo la mid ah AirPower Matari koronto oo fiilo la’aan ah tusaale ahaan.
Kicinta bilaa Wireless-ka ayaa la taageeray sanadkan airpods of Kadib, waxaa jiray rajo muhiim ah macaamiisha. Gaar ahaan Samsung Galaxy S10 waxaa ka mid ah lacag celinta wireless-ka ah iyo Galaxy Buds of dallacaadda wireless, taageerayaasha Apple waad yara caban doontaa Waan qiyaasi karnaa.
Isaga oo wali raba inuu war wanaagsan siiyo, falanqeeyaha ayaa sheegay in labada nooc ee iPhone 18W adabtarada dallacsiinta sugaya in la helo. Moodellada Apple ee cusub ee ‘Apple’ waxaan rajeyneynaa inaan soo bandhigno waxqabad dheeri ah, oo leh waqtiga Turkiga 20: 00 Bilaabi doonaa. In lagu wargaliyo wixii soo kordha is ilaali.